ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 34.8 လက်ပံပွင့်ချိန် ခွေးရူးချိန်
အိမ်ကိုလွမ်းကောင်းနေတုံး.. သန်းထွန်းလေး ဟစ်ဟော့က ၀င်လာတော့ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး
ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် လက်ပန်ပွင့်ကောက်ပြီး အိမ်ရောက်ရင် အမေကိုပြုတ်ခိုင်းပြီး ခရမ်းချင်သီးငါးပိချက်နဲ့ အားပါး.... ကောင်းမှကောင်း.... လွမ်းတယ်ဗျာ...
Hip Hop လည်း
စိန်ခြူးကြာညောင် နဲ့ 
က မယ်... :P
အညာဒေသအကြောင်းလေးဖတ်ရတာ ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ဟစ်ဟော့သီချင်းလေးကလည်း ဘယ်ဆိုးလို့တုန်းဗျ။ ပြုံးမိပျော်မိပါတယ်။
ဇောင်ချမ်းချဉ် !!! ဇောင်ချမ်းချဉ် !!!
ကျွန်မရဲ့ favorite ရှင့် မစားရတာ ကြာလှပေါ့
ဘူးချဉ်ကတော့ ရေစကြိုကနေ ရန်ကုန်ထိ လူကြုံနဲ့ မှာစားနေကျ
စင်ကာပူရောက်တော့ အိပ်မက်ထဲပဲ ထည့်မက်ပြီး စားရတော့တယ်
အကို ပြောတဲ့ ဇောင်းချမ်းချဉ်ကို စားဖူးချင်လိုက်တာ
Hip-Hop သီချင်းကိုတော့ ဆိုကြည့်ရင်းနဲ့ရီလိုက်ရတာ အရမ်းပဲ
ကိုနဗနရဲ့ရောသမမွှေပေါ့ဗျာ
ဟစ်ဟော့သီချင်းကို .. ရင်တွင်းဖြစ်ကော်ပီ လုပ်ဖို့ .. ကူးသွားပါတယ်ဗျို့ ..